Dhallaanka Kelinimada ku Yimaada oo aan la Midoobin Qaraabadood - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhallaanka Kelinimada ku Yimaada oo aan la Midoobin Qaraabadood
La cusbooneeyay måndag 28 maj 2012 kl 11.22
La daabacay måndag 28 maj 2012 kl 09.24
Keliya mid tobankiiba dhallaanka kelininada dalkan ku yimid sannadihii ugu dambeeyey ayaan la midoobin qaraabadood, sida ku cad war-bixin hayadda socdaalku u sameeysay laanta wararka Ekot ee idaacadda Iswiidhen.
Horay ayaa loo sheegi jiray in dhallaanka kelinimada dalka ku yimaada ey soo diraan waalidkii ama qaraabadii ka masuulka aheyd si ey uga daba-yimaadaan kolka ey dalka deggenaansho ku helaan, waxa mararka qaarkood afkan lagu yiraahdo ”ankarbarn”.
Tresor Kayira oo ka soo jeeda dalka Koongo ayaa dalkan ku yimid kelinimo kadib kolkii la dilay waalidkii dhalay lix sannadood hortood.
– Laba dhabbo ayaa jira. In xumaanta iyo kelinimada un laga fekero, ama in lagu tallaabsado waxa shakhsiga u wanaagsan, sida uu sheegay Tresor Kayira.
Sida uu qorayo xeerku, wuxuu u suurtagelinayaa in dhallaanka dalkan kelinimada ku yimaada ey la midoobaan waalidiintood iyo walaalahood. Iyadoona ay laanta wararka ee Ekot ay baaritaan ku sameeysay sidii wax looga ogaan lahaa tirada dhallaanka ee la midooba waalidkood.
Dhallaanka kelinimada dalkan ku yimod sannadihii u dhexeeyey 2007 illaa iyo 2010 deggenaanshana dalkan ku helay ayey tiradoodu gaarsiisneyd 4 200, iyadoona 10% ee tiradaasi ahina lsuurtagal u noqotay iney la midoobaan waalidkii dhalay ama walaalahood. Tirada qaraabadaasina gaarsiisan yihiin 1 130. Tiradaa ayey sidoo kale ku jiraan qaraabada guurka ku yimid, ilmaha guursadey kolkii ey buuxiyeen da’da 18-ban ee qaan-gaarka.
Sawirka ey siyaasiyiinta degmooyinku ka bixin jireen dhallaankan ayaa ahaa waxa lagu magacaabo ankarbarn (dhallaan la soo hor-mariyo si ey qaraabadu gadaal uga timaado), sida uu sheegay madaxii hore ee ciidanka ammaanka ahna gudoomiyaha gobolka Björn Eriksson oo sannadkii 2010 ka sameeyay baaritaan middaa ey dawladdu u xil-saartay.
– Qaasatan marka lala xiriiro siyaasiyiinta maamulllada gobollada iyo shaqaalaha ku howl-lahaa iney rumeeysnaayeen in dhallaanka loo soo diro si waalidkoodu uga daba-yimaadaan.
Ronnie Magnusson, ahna sarkaal ka howl-gala hayadda socdaalka laanta u qaabilsan dhallaanka kelinimada dalka ku yimaada ayaa sheegay inuu jiro fikir la aaminsan yahay ee degmooyinka ka jira.
– Waa doodo soo baxa iyo iney dhallaankaasi dalka u yimaadaan sidii ey waalidiintood ku keeni lahaayeen. Waxaanunna oran karnaa in middaasi beenowday, si lagu xaqiijiyana lagala xaajoon karo ama wax laga weydiin karo degmooyinka deriyada lala yahay ee dhowr sannadood qaabilayey dhallaan kelinimo dalka ku yimaadey, sida uu sheegay Ronnie Magnusson.